नादेझ्दा कप महिला फुटबल – ५ दिनमा ४ खेल ! | Hamro Khelkud
नादेझ्दा कप महिला फुटबल – ५ दिनमा ४ खेल !
काठमाडौं (हाम्रो खेलकुद) – नेपाल महिला फुटबल टोली यति बेला स्वदेशमा आयोजना हुने १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को तयारी जुटिसकेको छ । यसै सिलसिलामा तयारीलाई अझै परिस्कृत बनाउनका लागि नेपाली टोलीले किर्गिस्तानमा हुने नादेझ्दा कप फुटबल प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने तय भएको छ ।
प्रतियोगिताको खेल तालिका अनुसार सहभागी सबै टोलीले ५ दिनमा ४ खेल खेल्नु पर्ने भएको छ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले दिएको जानकारी अनुसार नादेझ्दा कप भदौ २२ देखि २६ गते सम्म आयोजना हुनेछ ।
नेपाल आयोजक किर्गिस्तानसँगै ताजिकिस्तान र उज्वेकिस्तानले प्रतियोगितामा भाग लिनेछन् । सहभागी सबै टोलीले भदौ २२ देखि २४ गते सम्म लगातार तीन खेल खेल्नुपर्नेछ । २५ गते विश्राम र २६ गते पुनः खेल खेल्नु पर्ने एन्फाले जनाएको छ ।
नेपालले आयोजक किर्गिस्तानसँग भदौ २२ गते खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ । दोस्रो खेलमा उज्वेकिस्तानको सामना गर्ने नेपालले भदौ २४ गते ताजकिस्तानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । तेस्रो स्थान र फाइनल खेल भदौ २६ गते हुनेछ ।
नेपाली महिला फुटबल टोलीले पछिल्लो केहि सातायता स्वदेशमा आयोजना हुने १३ औं सागको लागि प्रशिक्षण गरिरहेको छ । प्रशिक्षक हरि खड्काले ४२ खेलाडी समेट्दै प्रशिक्षण गराइरहेका छन् । चैतमा साफ च्याम्पियनसिपमा उपविजेता बनेको नेपाली टोली त्यसअघि भारतमा भएको हिरो गोल्डकपमा पनि उपविजेता नै बनेको थियो ।
नेपाली टोली गत वर्ष ओलम्पिकको दोस्रो चरणमा पुग्न सफल भएको थियो । नेपालमा हुने १३ औं सागमा नेपालले स्वर्ण पदक जित्ने लक्ष्यसहित तयारीमा जुटेको छ । पछिल्लो तीनै संस्करणमा फाइनल खेलेको नेपालले उपाधि जित्न सकेको छैन । १३ औं साग काठमाडौं र पोखरामा मंसिर १५ देखि २४ गते सम्म आयोजना गर्ने तय भएको छ ।
नादेझ्दा कप फुटबल प्रतियोगिता
२०७६ भदौ २२ गते ताजकिस्तानविरुद्ध उज्वेकिस्तान
२०७६ भदौ २३ गते नेपालविरुद्ध उज्वेकिस्तान
२०७६ भदौ २४ गते नेपालविरुद्ध ताजकिस्तान
२०७६ भदौ २६ गते तेस्रो स्थान